भरतपुरकी मेयर रेनुले १ बर्षमा यस्तो गरिन् काम, हेरौँ एक वर्षे यि हुन् काम ! (विवरणसहित) - Chitwan Online Khabar
२१ श्रावण २०७५, सोमबार १४:५८
चितवन, २१ साउन । ठीक एक वर्षपहिले भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखको पदभार गरेपछि रेनु दाहालले भरतपुर अस्पतालमा उपचारका लागि आउने महिला तथा वृद्धहरूलाई ओपीडी टिकट निःशुल्क गराउने भनी पहिलो निर्णय गर्नुभयो । त्यो निर्णय यस वर्ष पनि कायम गरिएको छ ।
महानगरको पदभार ग्रहण २०७४ साउन २२ गते
बजार र राजमार्गको मुख्य २० वटा स्थानमा ट्राफिक आइसलाण्ड निर्माण गरिएको ।
९५ कि.मी. रिङ्ग रोड र लिंक रोड कामको सुरुवात गरी यसै आ.व.बाट १० कि.मी. रिङ्ग रोड र ६५ कि.मी. लिङ्करोड निर्माण सुरु अन्य स्थानमा ई आइए र DPR तयार हुँदै । निर्माणाधिन रिङ्ग रोड २४ मीटरदेखि ३० मीटर चौडाईको हुने जसमा ७ मीटर र ५ मीटरको दुई लेन बिचमा डिभाईडर दुबै तर्फ हरियाली सहितको फुटपाथ र एकपट्टी साईकल ट्रयाक समेत रहने ।
महानगरले गत आ.व.मा महानगर जनसहभागीता र अन्य सरकारी निकायहरुको सहकार्यमा करिब ५० कि.मी. बाटो कालोपत्रे भएका छन् ।
नारायणगढको लायन्स चोकस्थित तरकारी बजारमा रहेको करिब १० कठ्ठा जग्गामा नगर बिकास कोषको सहुलियत ऋणमा बुहतले व्यवसायिक भवन निर्माणको काम यसै वर्षदेखी अगाडी बढाउने तयारी भैरहेको छ ।
साभार सौराह अनलाईन वाट
चितवन प्रहरीद्धारा ठूलो परिमाणमा घरेलु मदिरा नष्ट